China Handheld Garment Steamer fekitari uye vagadziri | Meiling
Yakabata Ruoko Nguo Steamer
Ruoko-rwakabata nguvo chinotakurika mbatya dzinotakurika steamer 1000W yakatwasuka & yakatwasuka chiutsi, 45s inokurumidza kupisa-kumusoro, auto-off, 90ml yakakwira tangi yemvura tangi, yekumba uye yekufamba.
Heater zvinhu aruminiyamu chiwanikwa hita
MAX mweya unobuda (g / min) 20g / min
Bata kudzora basa chinja muchina; ironing yakaoma uye yakanyorova
Tsigira tsvimbo zvinhu hapana tsvimbo yekutsigira
Zvishongedzo kupisa nhovo; bhegi rekuchengetera
Kutengesa nguva 26-30S
Steam Nguva 5-11maminitsi
Mvura Tangi Kugona 90ml
Steam Yakagadzirira Nguva 35 s
Chigadzirwa Dhizaini (LxWxH mu mm) 228x182x140
1. Inogona kuainwa kana kusungirirwa, marudzi ese ejira akakodzera
Nyanzvi yakaoma yakaoma ironing tekinoroji, iyo inogona kushandiswa pakaoma ironing kana kunyorova ironing, iyo yakasiyana neyechinyakare simbi yekushanda nzira. Mushini we ironing une maviri emhepo modhi mune yakanyorova ironing mamiriro. Inogona kubata nyore nyore nehembe dzakasiyana.
2. 45s preheating, inokurumidza steam
0.3s yakasimba inopinda uye kutsetseka mushure mekuayina. Iva musangano webhizinesi kana rwendo rwekuzorora, iyi simbi inotakurika yakufukidza!
3. Supercharged steam inopinda zvipfeko
Uye iro jira rinoumbwa nechipiri kudzvanya
Ceramic glaze aluminium alloy pani，inotsvedzerera hombe pani, 6 maburi emhepo, kuchengetedza nguva yekuayina.
4. Ergonomic dhizaini
Mhando dzakasiyana dzinobata, ironing inoshanduka-shanduka, isina-slip mashure anogona kugadziridzwa uye kutenderedzwa pamakona mazhinji e0 ° / 180 °, zviri nyore kushanda. kune seam, kora, cuffs uye mabhatani nyore nyore. Neichi chishandiso chakangwara muruoko, ironing mbichana-dzinotaridzika mbatya dzave kushoma.
5. Kuyera zvakapoteredza 310g ne 90ml tangi remvura.
Izvo zviri nyore kushandisa uye zvinotora zvingangoita pasina mukwende nzvimbo!
99.99% yekuberekesa. Dual kudziyisa tekinoroji inogona kupa inoenderera uye ine simba steam
6.Tembiricha inogona kugadziridzwa zvinoenderana nezvinodiwa nemunhu kana machira akasiyana, akakodzera kwakawanda kwembatya uye kugadzirisa kupisa kwemaoko.
● ○○ 70-120 ℃ inokodzera nylon uye polyester
● ● ○ 100-160 ℃ inokodzera sirika nemvere dzemakwai
● ● ● ● 140-210 ℃ inokodzera donje nemucheka
Pashure: Mosquito-Kuuraya Lamp
Zvadaro: Nguo Steamer
Nguo Steamer Yehembe
Inotakurika Nguo Steamer
Nyanzvi Yenguvo Steamer